पांच बर्षको हुदा हराएका पुजा देवकोटाको बुवा अझै फर्किएनन्! आफ्नै कथामा मार्मिक गीत गाउंदा आफै रोइन् पुजा (भिडियो) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > पांच बर्षको हुदा हराएका पुजा देवकोटाको बुवा अझै फर्किएनन्! आफ्नै कथामा मार्मिक गीत गाउंदा आफै रोइन् पुजा (भिडियो)
admin November 20, 2018 भिडियो 0
अशोक दर्जी हुन् वा भूईकटर । अथवा मनिष लिम्बु, मांनेमा लिम्बु एकपछि अर्का भाईरल नेपालीहरुको संख्या बढ्दो छ । यता पछिल्लो समय नेपालमा भाईरल भएका छन् अचम्मको जोडी बखत विष्ट र प्रतिभा चौधरी ।
विश्वभर रहेका नेपालीहरु माझ लोकप्रिय छिन् पुजा देवकोटा । अर्थात यतिबेला भाईरल गर्ल (बालिका) हुन् पुजा । जसको सुरिलो आवाजले धेरै नेपालीहरुको मन जिति रहेको छ । भने उनको दर्दानक कथा सुन्दा जो कोहीको मन रुने छ ।
लकडाउनको पिडा – मरौं, छोरीहरू छन्, बाँचौं, गाह्रो भो ! (भिडियो सहित)